Etu B2B Ahịa siri gbanwee | Martech Zone
Wednesday, December 11, 2013 Tọzdee, Disemba 10, 2013 Douglas Karr
Ihe omuma a site na Mee ka Social Media dịkwuo elu mara mma na-ewepụta uru nke ahịa inbound dị ka akụkụ nke usoro ahịa gị niile. Agbanyeghị, ọ bụ ihe nwute na ha họọrọ itinye otu atụmatụ megide ibe ya karịa ịnye ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-ejikọ usoro abụọ a.
Site na ijikọta ụzọ inbound na outbound na ahịa B2B, ịnwere ike ijide ma kaa akara gị na-eduga ka ha na ọdịnaya gị na mmekọrịta mmekọrịta na ịntanetị. Nke a na-enye kediegwu data maka gị ọpụpụ atumatu. Ọ ga - enyere gị aka ikuzi olile anya gị ma chụga ha ọrịre. Ọ na - enyere ndị ahịa gị aka imechi ngwa ngwa n’ahịa, mee ka uru ahịa ndị ahụ bawanye, ma dakọkwaa ndị ahịa buru ibu na ngwaahịa na ọrụ ị na - enye.
B2B Ahịa agbanweela - mana iji usoro inbound na outbound eme ihe nwere ike ịbawanye ahịa ahịa gị, bulie mmepụta ego gị, ma mee ka ikike akara gị chọrọ maka ahịa dị ire.
Tags: ahịa b2bịde blọgụakpọ oyiozi ederedeihe omumuemail Marketinginboundinbound ahịaọpụpụọpụpụ ahịaikike dabere na emailebipụtalaghachi azụmaahịaOyiboROIAelekọta mmadụ mediaegosi ahia
Nzọụkwụ Asaa na Akụkọ zuru oke
Dec 12, 2013 na 1:07 PM